Robert Parker Mpisolovava divay azon'i Michelin Guides
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Robert Parker Mpisolovava divay azon'i Michelin Guides
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Dihy mariazy eny an-kalamanjana, Pieter Brueghel the Younger (1566)
Mety efa naheno ianao fa nahazo vao haingana i Michelin Guides The Robert Parker Divay mpisolo vava (RPWA). Tsy tokony hahagaga loatra izany satria nividy 40 isan-jaton'ny orinasa i Michelin taona vitsivitsy lasa izay (2017). Ho fanampin'izay, ny RPWA sy Michelin dia niara-niasa nanomboka ny taona 2016 tany Singapour, Hong Kong ary Macau fisotroana divay sy fisakafoanana ambony ary ny fampandrosoana ny atiny nomerika sy serivisy vaovao.
Nicolas Achard no tale jeneralin'ny RPWA miaraka amina iraka - hampitombo ny fandrakofana divay ny divay, hampiditra ny fahalianan'ny divay mihombo amin'ny tsena vao misondrotra, hamolavola rafitra ekolojika nomerika manambatra ny gastronomy sy ny divay ary manolotra traikefa manokana.
The Parker Legend
Ny fotoana sy ny fandresen'i Parker dia manao tantara mahatalanjona. Teraka tao Monkton, Maryland, i Parker dia nahazo diplaoma tao amin'ny University of Maryland Law School tamin'ny 1973, nanao fanazaran-tena nandritra ny 10+ taona, ary, tamin'ny 1984, dia nametra-pialana tamin'ny toerany ho mpanolotsaina jeneraly mpanampy ho an'ny Banky momba ny trosa any Baltimore. Vakio ny lahatsoratra feno ao amin'ny divay.travel.